असिना पानीले आँप र केरामा क्षति
राजविराज। हावाहुरीसहित एक्कासि आएको असिनापानीले सप्तरी जिल्लाको पूर्वी भेगको गहुँ, आँप र केरा खेतीमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ।
खासगरी जिल्लाका भारदह, पोर्ताहा, मैनाकडेरी, बैरवा, मधवापुर र बदगामालगायतका गाउँ विकास समितिमा असिनापानीको असर बढी देखिएको छ।
एक साताअघि र पछि आएको हावाहुरी तथा वर्षात्सँगै परेको असिनाले गहुँ खेती, आँप खेती र केरा खेतीमा निकै असर परेको हो।
यस वर्ष जिल्लाका अधिकांश स्थानमा आँप र गहुँ बाली राम्रो थियो। हावा हुरीसँगै आएको वर्षाले आँपका २० प्रतिशत टिकुला (चिचिला फल) झारेर नोक्सान पुर्‍याएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ। अरू वर्षको तुलनामा यस वर्ष सप्तरीमा आँप उत्पादन निकै हुने अनुमान गरिएको थियो।
तीन सातादेखि प्रत्येक शनिबार साँझ दुई/दुई घण्टासम्म परेको असिनापानीले भारदहमा लगाइएको केरा खेतीमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
वर्षा तथा असिनालेे भारदहमा लगाइएको केरा खेतीमा मात्र रु. २० लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरको क्षति भएको किसानहरूको गुनासो छ।
सप्तरी केरा खेतीका लागि अब्बल जिल्ला हो। सप्तरीको भारदहमा २ सय जना किसानले व्यावसायिकरूपमा ३ सय बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्दै आएका छन्। किसान, कृषि मजदुर, मलखाद्य तथा कीटनासक बिक्रेता, केरा व्यापारी, बजारका खुद्रा व्यापारी गरी १० हजार व्यक्तिले केरा खेतीबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। भारदहको केरा खेती जोगिनियाँ, हनुमाननगरसम्म विस्तार हुँदै गएको छ।
हाल भारदह क्षेत्रबाट वर्षैभर केरा उत्पादन भइरहेको छ। दैनिक १० ट्रक उत्पादित केराले मुलुकको विभिन्न सहरमा बजार पाएको छ। पाँच वर्षअघिसम्म भारतबाट नेपाल भित्रिने गरेकामा हाल पूर्वी भारतमा समेत भारदहको केरा निर्यात भइरहेको छ। नेपालको सुनसरी, मोरङ, सिरहा, काठमाडौं, नारायणघाट, जनकपुरलगायत बजारको २५ प्रतिशत माग भारदहको केरा बगानले पूरा गर्दै आएको छ। तर हावाहुरी, असिना र जङ्गली हात्ती, अर्नाका कारण यहाँका केरा व्यावसायीहरू पीडित बन्दै आएका छन्। बर्सेनि करोडौंको क्षति हुने गरे पनि क्षतिपूर्ति नपाउने भएपछि कृषकहरू केरा खेतीबाट विस्थापित हुने खतरा बढेको स्थानीय लक्ष्मण मण्डलको भनाइ छ।
गत साल कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आएका हात्तीले पनि यहाँका कृषकहरूको रु. २० लाखकै हाराहारीमा केरा नष्ट गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले सो क्षतिपूर्ति दिने भनिएको राहत रकम हात नपर्दै फेरि यस वर्ष पनि केरा किसानले क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष केराको माग आपूर्ति गर्न भारतबाट करोडौं मूल्य बराबरको केरा आयात हुने गरेको छ। प्लटिङ र बढ्दो घर निर्माण कार्यका कारण कृषि क्षेत्र साँघुरिंदै गएका बेला किसानहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैलै केरा खेतीलाई दिगो राख्ने हो भने सरकारले किसानको मनोबल उठाउने र प्रकोपबाट बचाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनु अत्यावश्यक छ।